Ithegi: oonozakuzaku bophawu | Martech Zone
Ithegi: oonozakuzaku bophawu
Uyenza kanjani i #Hashtag Contest kumajelo eendaba ezentlalo
NgoLwesibini, Julayi 28, 2020 NgoLwesibini, Julayi 28, 2020 Douglas Karr
Xa uqhuba ukhuphiswano okanye unikezela, iifom zokungenela zinokoyikisa abo banokuthi bathathe inxaxheba. Ukhuphiswano lwe-hashtag lususa loo miqobo yokungena. Abathathi-nxaxheba bakho bafuna ukusebenzisa i-hashtag yakho kuphela, kwaye ukungena kwabo kuya kuqokelelwa kwisibonisi esitsala amehlo. Imincintiswano ye-ShortStack hashtag ikuvumela ukuba uqokelele ungeniso lwe-hashtag kwi-Instagram nakwi-Twitter ngelixa usonyusa ukuzibandakanya kwakho nabalandeli. Ukuqokelela Umxholo oveliswe ngumsebenzisi kunye nokuThola iiNxusa zeBrand ukhuphiswano lwe-hashtag yeyona ndlela ilula yokuqokelela umxholo owenziwe ngumsebenzisi.
Iingcebiso ezi-5 malunga nendlela yokunyusa ukuHlolwa kwabaThengi bezeMidiya yoLuntu
NgeCawa, ngoSeptemba 9, 2018 NgeCawa, ngoSeptemba 9, 2018 UOlivia Ryan
Indawo yentengiso ngamava anzima, hayi kuphela iimveliso ezinkulu kodwa kunye nomndilili. Nokuba uneshishini elikhulu, ivenkile encinci yasekhaya, okanye iqonga le-intanethi, amathuba akho okunyuka kwinqanaba le-niche mancinci ngaphandle kokuba ubakhathalele abathengi bakho. Xa uxakeke lithemba lakho kunye nolonwabo lwabathengi, baya kuphendula ngokukhawuleza. Baza kukubonelela ngezibonelelo ezinkulu ezibandakanya ukuthembela, uphononongo lwabathengi, kunye
Ukubetha kwentliziyo: Fikelela ngaphezulu kwe-150,000 yabathengi ababhinqileyo ababhinqileyo
NgoLwesihlanu, Matshi 2, 2018 NgeCawa, ngoMatshi 4, 2018 Douglas Karr
Iibhranti namhlanje zichitha i-36 yezigidigidi zamajelo kwezentlalo ukubandakanyeka kunye nokufumana abathengi abatsha bemillennial besebenzisa imikhankaso yesitayile se-Influencer esinamagama osaziwayo. Nangona kunjalo; Ukuzibandakanya kunye nokuguqulwa kuphantsi kuba abafazi bewaka leminyaka bathembela kwaye bazibandakanya ngakumbi neengcebiso zabahlobo ngokukodwa xa bekhetha phakathi kwemveliso enye okanye inkonzo kunye nenye. Ukubetha kwentliziyo liqonga labasetyhini abaliwaka leminyaka ukukhuthaza iimveliso ngaphakathi kweeakhawunti zabo zentlalo kunye noluntu. Ukubetha kwentliziyo kutsha nje kukhuphe ukuFumana ukutya, kubonelela ngendlela engenamthungo
Intengiso yempembelelo: Imbali, i-Evolution, kunye neKamva
NgoLwesine, Agasti 10, 2017 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 UBrian Wallace
Abaphembeleli bemithombo yeendaba kwezentlalo: yinto yokwenene leyo? Ukusukela ukuba imithombo yeendaba zentlalo ibe yeyona ndlela ikhethwayo yokunxibelelana nabantu abaninzi ngo-2004, uninzi lwethu alunakucinga ngobomi bethu ngaphandle kwalo. Inye into yokuba imithombo yeendaba zentlalo itshintshile ukuba ingcono kukuba idemokhrasi kofumana udumo, okanye ubuncinci. Kude kube kutshanje, kuye kwafuneka sixhomekeke kwimiboniso bhanyabhanya, kwiimagazini, nakwiinkqubo zikamabonwakude ukusixelela ukuba ngubani odumileyo.
Iziphumo zabaThengi njengoMxholo: UDan Anton walinyusa njani ishishini lakhe le-SEO kwii-7 Amanani aBonisa ubungqina
NgoLwesine, uJuni 9, 2016 NgoLwesihlanu, ngoJuni 10, 2016 Douglas Karr
Ukuthengisa umxholo kusetyenziswe kakhulu, kuphantsi kohlalutyo, ibinzana lebinzana le-KPI kwintengiso eye yaya kwisiphelo sayo esisengqiqweni, abanini bamashishini bebhloga malunga nezihloko ezingathandekiyo ukuze banxibelelane okanye bagcine iwebhusayithi yabo intsha. Umxholo awuthethi ukuba kuya kuphela kwiminyaka eyadlulayo uGoogle wayethanda ukubeka iiwebhusayithi ezinkulu ezinomxholo ongaphezulu. Oku kukhokelela kubhlogi, abaxhasi, kunye nabanini bamashishini ukukhupha umxholo wentengiso ye-nauseam, ngesithembiso esilindelweyo sekamva